USylvia Plath 'uMary Ventura kunye noBukumkani beThoba' utyhila umxholo - Ubugcisa
Eyona Ubugcisa Ibali elifutshane elisandula ukufunyanwa likaSylvia Plath lityhila iNtsingiselo yoncwadi oluMnyama kuMsebenzi woMlobi
Ibali elifutshane elisandula ukufunyanwa likaSylvia Plath lityhila iNtsingiselo yoncwadi oluMnyama kuMsebenzi woMlobi
USylvia Plath UMary Ventura kunye noBukumkani boThoba , Ikhutshwe nguHarperCollins.UHarperCollins
ngubani wena ukhangela umnxeba
Ngo-1952, ngaphambi kokuba uSylvia Plath atshate noTed Hughes kwaye wasebenzisa ubumnandi kunye neentlungu zento awayeyibiza ngokuba yindlu yasekhaya, imbongi encinci yayisengumfundi onethemba kwiKholeji yaseSmith. Ibali elifutshane elifunyenwe kutshanje ukusukela ngeli xesha, ibali elingacacanga elingumfuziselo kumagama ombhali, liya kukhutshwa eMelika ngoFebruwari nguHarperCollins.
U-Plath oneminyaka engama-20 ubudala wayelingenise eli bali kwasekuqaleni Nkosazana iphephancwadi, upapasho amabhaso akhe okubhala awaphumeleleyo kunyaka ophelileyo kwaye wayeza kufundela phi kwihlobo elilandelayo ngelixa ebhala Intsimbi yeBell , kodwa yaliwa. Kwiminyaka emibini kamva, uPlath wahlaziya isiphelo sebali ukuze lisenze sibi ngakumbi, siphele ngakumbi. Inguqulelo epapashwayo ngoku yeyantlandlolo engoyikiyo, esisityebi, kwaye ngokwembono yomshicileli wase-Bhritane u-Faber, owakhupha ibali kwiphepha elibhalwe e-UK nge-3 kaJanuwari, eyona ilungileyo.
Bhalisela iNcwadana yeendaba yoBugcisa
Ukuthatha igama layo komnye wabahlobo besikolo esiphakamileyo sikaPlath, UMary Ventura kunye noBukumkani boThoba iqala ngokuthamba kukaMariya engeniswa kuloliwe ohamba ngabazali bakhe. Uloliwe wayeyaphi, ayaziwa, kodwa isimo sengqondo esibi sikhawulezisa ngokukhawuleza njengoko uloliwe egudla indlela yakhe emasimini ekwindla nakwiifama ezingenazintsholongwane.
Uloliwe, esifunda kungekudala, usinge ngasemantla—Ukuzeindawo umfazi omkhulu ohleli ecaleni kukaMariya ubiza umhlaba wentando ekhenkcezisiweyo. Ngokufana ne Intsimbi yeBell, inyani kweli bali ayibalulekanga kangako kunoko kuqhubeka entlokweni kaMariya. Kuloliwe kulapho kungekho ndawo, ilanga yicwecwe leorenji ethe tyaba kwaye amavili akhonkotha njengezintaka ezimnyama ezijikelezileyo xa uMary eqala ukuqaphela imiqondiso ebonakala ngaphambili efestileni. USylvia Plath.Imifanekiso kaGetty
Njengonobumba obuninzi uPlath wabhalela umama wakhe kunye nonyango-isambuku esikhulu senziwe esidlangalaleni kunyaka ophelileyo-Ukuqwalaselwa kukaPlath kwiinkcukacha kuyamangalisa. Uluhlu lwezihlalo ezibomvu eziluhlaza kunye nezibane ezikhanyayo ze-neon kuloliwe zihambelana ne-lipstick ebomvu emlonyeni kamama kaMary xa enika intombi yakhe ukungacacanga, ukwanga okuxakekileyo kunye nobomvu kwimilebe yowasetyhini, ongathandiyo ukwamkela indawo aya kuyo, ubanjiwe kwaye baphuma kuloliwe ngumqhubi. Xa uMary othukileyo ebuza isihlalo sakhe esihlala ngokunitha ukuba kunjani kwilizwe elisentla, iqhina libonakala kumsonto womfazi.
Amava okufunda UMary Ventura kunye noBukumkani boThoba ayinako ukwahlulwa kwinto esaziyo ukuba iyeza: intshabalalo esondeleyo yenze into eyoyikeka ngakumbi kukungazi ulonwabo kwabanye abakhweli kuloliwe. Bonke abaziimfama, eli bhinqa lixelela uMariya ngoosomashishini abahlekayo kunye nabantwana abaxabanayo. Njengobulolo obufuthanisayo obugula ngengqondo, uMary yedwa ubonakala eyazi intshabalalo ebukumkanini bethoba.
Umntu unokubona abaphambili bangaphambili kwi UMary Ventura kwincwadi athe wakhululwa kuyo ngokungafiyo.Nam ndinaso esi sicatshulwa Intsimbi yeBell watyabeka eludongeni lwam ngexesha lesikolo samabanga aphakamileyo:
Xa bendibuza ukuba ndifuna ukuba ngubani ndathi andazi.
Owu, ngokuqinisekileyo uyazi, umfoti wathi.
Ufuna, watsho uJay Cee ngobuqili, ukuba abe yiyo yonke into.
Ndaziva ngaphakathi Intsimbi yeJar indlala ka-Esther Greenwood yokutya umhlaba kunye noxinzelelo olukhulu loko ndikulindeleyo njengoko ndandikulungele ukuya ekholejini, kodwa ngaphezulu koko, Intsimbi yeBell imalunga nokuziva ungonelisekanga ngokungenantlonelo, malunga nendawo ekuyiwa kuyo elandelayo okanye isiganeko esibalulekileyo soloko kusisiphoxo kuba amabhongo ahlala esiza kwisandla sokwahlulwa komphefumlo okukhula ngokukhula noxinzelelo.
UMary Ventura kunye noBukumkani boThoba libali elizayo lobudala, ngeendlela ezininzi, nazo. U-Mary akakasindwa ziinkxalabo zenkcubeko yenkulungwane yesini malunga nobufazi kunye nokuba sekhaya kuka-Esther Greenwood, kodwa ugcwele ityala elifanayo no-Estere ngokungalawuleki ikamva lakhe, azibophezele ekuzivumeleni bakhwele kuloliwe esiya ekufeni kwakhe ukuze akholise abazali bakhe.
Obu bukumkani bufriziweyo ekugqibeleni komgca biziva ngathi yindawo iPlath ayinakuphepheka kwaye ayilawuleki ngokuthambekisela kuyo, mhlawumbi nakwindawo awayefudula eyiyo. Ukuxelelwa, ibali lalibhalwa kwiinyanga ngaphambi kokuzama ukuzibulala kukaPlath okokuqala ehlotyeni ngaphambi konyaka wakhe omkhulu ekholejini, ishumi leminyaka ngaphambi kokuba azibethele eontini kwigumbi lakhe laseLondon ngelixa abantwana bakhe ababini belala kwelinye igumbi.
Kwi Ubukumkani besiThoba , nangona kunjalo, uMary uyakwazi ukumelana nobumnyama obuzayo. Ngokuqinisekisa kwakhe ukuba umyolelo usele, utsala intambo yexakeka kwaye aphume kuloliwe njengoko ekhwaza emisa. Unikwe i-arhente engenayo uPlath, uMary ugijima kwizitepsi ezingakhanyiswanga, ejonge ngasemva nje kancinci ukubona ubuso obukruqulayo, obungenangqondo, obungenabuntu obujonga kuye ngololiwe. Ngokuthe ngcembe, ubumnyama bunyibilika bube lilanga, kwaye, njengalowo uvuka ebuthongweni bokufa, ekugqibeleni ukhululekile — uphila ixesha elithe chatha.
'URay Donovan' Phinda u-4 × 08: Musa ukuba yiDyckman
Isikhokelo sakho seveki ukuya kweyona Miboniso ilungileyo kunye neMidlalo bhanyabhanya ukuze ubukele
app ekwazisa xa kukho into ethengiswayo
khangela inombolo yasimahla
Uluhlu lwamabhilidi uluhlu lokufunda 2016
uyakholelwa kubuxoki boluntu
Zithini izibonelelo zegoli gummies
patti lupone uphambene intombi
ngaphezulu kwekontraki yokutya